'Ezigbo Onye Nchọpụta' Oge 3, Ihe Nlekọta 1 Recap - Ozi
'Ezigbo Onye Nchọpụta' Oge nke 3, Agba nke 1 Recap: Illbọchị Na-arịa Ọrịa
N’ụzọ na-ese onyinyo ihe ọ bụla dị mma, oge atọ nke ihe nkiri mpụ a na-atụ anya ya mepere n’ọhịa ukwu na nwa ewu nke na-agba ịnyịnya igwe n’egwú egwu.
Echetara m ihe niile, ka onye ọchọpụta Wayne Hays (Mahershala Ali) kwuru na ntinye akwụkwọ nke 1990 ya, na-echeta ụbọchị a gbanwere ụbọchị mgbe ihe niile gbanwere na West Finger, Arkansas.
Nke kacha ọhụrụ Ezigbo onye isi nkeji nkeji site na Nic Pizzolatto wea site na oge atọ: 1980, mgbe mpụ ahụ mere n'onwe ya, 1990 mgbe a ga - akagbu (ma ndị na - ege ntị amatabeghị) nkwenye ahụ wee meghee ikpe ahụ, na 2015, mgbe Wayne mere agadi na - alụ ọgụ ncheta nchekwa, idekọ ihe omume ụbọchị ahụ iji nọrọ na egwu, ebe ihe ndị mere n'oge gara aga ka na-aga.
Akwụkwọ Warrick / HBO
Laa azụ na November 7, 1980, ụbọchị Steve McQueen nwụrụ, Tom Purcell (Scoot McNairy), onye na-a beerụ biya, nna na-edozi ụgbọ ala, na-ahapụ ụmụ ya Will, 12, na Julie, 10, ka ha gaa ebe egwuregwu.
Anyị nwere ike ịkọrịrị na ụmụaka ndị a agaghị anụkwa ọzọ, yabụ, oge eruola ka anyị rịba ama na ndị niile nwere ike ịkatọ bụ ndị hụrụ ka ha na-agba ịnyịnya ígwè ikpeazụ ha: ụmụ nwoke atọ dị afọ atọ na-acha odo odo na-acha odo odo, ụmụaka ndị na-apụ apụ ọkụ na ogige akpọ Ekwensu Den (ebe ọ bụ naanị ihe dị mma ka a na-eme) na nwa amaala America nke na-anya ụgbọ ala na-agagharị n'obodo, ụgbọala na-adọkpụ jupụtara na ya.
Na mgbede ahụ, Wayne, n'onwe ya na onye ọrụ ibe ya Roland West (Stephen Dorff) na-arụ ọrụ, ha abụọ na-afụ ụfụ ọkụ na ebe a na-ekpofu ahihia site na ịnwa ịfụ oghere n'ime oke (dịka ịbọchigharị maka oge niile oke oke wepụrụ ihe niile Ndi mmadu).
Roland na-atụ aro na ha ga-aga ileta ụlọ ndị akwụna, mana Wayne na-ekwu na ọ gaghị akwụli ya. Land ga-akwụ ụgwọ maka ya otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, ka Roland na-ekwu, na-egosi na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị dị ka ọ rụpụtara afọ iri atọ gara aga dịka ọ dị taa. (Mkparịta ụka a dị ka ndị na-ege ntị mara ma Wayne na Roland jere ozi na Vietnam, nke metụtara usoro a niile, ma yikarịrị ka ọ bụ mmalite 1980s America.)
Abụọ na-etre site na anya na ụmụaka abụọ na-efu efu.
Akananam abịatụbeghị gị na ọ nwere ike na-agha ụgha? A jụrụ Wayne na 1990. Iwu n'ozuzu bụ onye ọ bụla na-agha ụgha, ọ na-aza ma gbanyụọ onye na-edekọ ihe. Ya maara ihe m na-amaghị?
Anyị laghachiri n'ụlọ Purcell ebe Wayne na Roland rịọrọ ka ha lee anya n'ime ụlọ ahụ. Tom na-anwale ha na ha, ma mechaa nye ya ohere. Lọ ahụ, n'ezie, jupụtara na njirisi: Anyị chọpụtara Tom na nwunye ya, Lucy (Mamie Gummer), anaghịzi eso ọnụ ụlọ. Ha agabeghị kemgbe Cousin Dan gara. N'ime ime ụlọ Julie, e nwere ọtụtụ eserese, mana ọ kachasị, di na nwunye na-agba akwụkwọ, pụtara iche.
Dị nnọọ ka ndị uwe ojii na-eche ma ọ bụrụ nwunye Tom ka akpọrọ ụmụaka, Lucy gbagara wee malite ịkatọ di ya. Nke a abụghị ihe jikọrọ ọnụ maka nnukwu ezinụlọ.
Wayne gara n'ihu nyocha ya wee chọta Playboy na okpuru Will. N’ime ime ụlọ kaboodu Will, a na-ahụ ụzọ ikuku n’elu ala site n’ọnụ ụzọ mbata n’ime ime ụlọ ihi ụra Julie.
Iji nwetakwuo intel na Will, yana ụmụaka atọ dị na Beetle, Wayne na Roland na-eleta ingerlọ Akwụkwọ Ọchịchị West Finger, ebe ha na-ezute onye nkụzi Bekee bụ Amelia Reardon (Carmen Ejogo). Dị ka a ga - asị na edere na oge 2015 banyere nwunye Wayne - nnukwu onye edemede na ezigbo onye nkuzi — ezughi iji mee ka ị kwenye na abụọ ndị a mechara bụrụ ndị ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ, ka aghụghọ ka ha nwere ike, fee mgbe ha abụọ dinara anya na ibe. Ọ bụghị ihe niile na-atọ ụtọ, egwuregwu na anya googly, ọ bụ ezie. Amelia na-eduga ha na Freddie Burns, onye nwe ebe ahụ, bụ onye kwetara na ọ hụrụ ụmụaka ahụ n'ehihie ahụ, ebe enyi ya kwuru na ụmụaka ahụ hapụrụ ogige ahụ n'elekere 9 nke ụtụtụ. Hmm… ngbanwe
Ha nwere ike ọ gaghị adị nso na idozi mpụ ahụ, mana Wayne na-aga na akara ekwentị Amelia. Nke bu ihe dika ihe obi uto na obi uto dika ihe ndia na eme.
Ọzọ, ha na-aga eleta Trash Man Brett Woodard (Michael Greyeyes), na ụda olu Wayne si na 2015 kwuru, agbanyeghị, ị maara ihe mere ya. (Ma anyị adịghị !!!) Ọnụ ụzọ ya bụ na-emeghe, na site na foto n'ime ụlọ, anyị pụrụ ịhụ na ọ na mbụ nwere nwunye na ụmụaka abụọ. Ọ nọkwa na Vietnam.
Maka ụfọdụ ihe kpatara ya, na-ekwupụtaghachi Onye ahịhịa ahịhịa nke akụkọ a na-agagharị na 2015 Wayne na ọ na-akwụsị na mkparịta ụka ọ na-eme na ndị na-eme ihe nkiri na-eme mpụ. (Ha nọ n’ụlọ ya na-edekọ akụkọ banyere nchọpụta nke 1980.) Ọ na-aga n’ọmụmụ ihe ya, ebe ọ na-emetụ aka na typewriter ma wepụ akwụkwọ na shelf, nwunye ya - Amelia.
Na 1980, ịgagharị na-aga n'ihu na Wayne kewapụrụ onwe ya na nnukwu ìgwè. Roland kọwaara onye uwe ojii ọzọ na Wayne bụ Lurp na Vietnam (nke ahụ bụ, Long Range Reconnaissance), onye n'oge agha ahụ nọrọ naanị ya ọtụtụ izu n'ime ọhịa.
Wayne na-aga n'ihu na nyocha ya na iyi ebe ọ hụrụ igwe kwụ otu ebe, bụ nke ọkara ya na mmiri na apịtị. Na-ele igwe kwụ otu ebe bụ nwa bebi na-ama jijiji nke ejiri ahịhịa mee. Ka ọ na-aga n'ihu, nwa bebi ọzọ nọ ọdụ n'akụkụ oghere nke ọgba.
N'ime ọgba egwu Wayne kachasị njọ na-emezu ka ọ na-achọpụta Will, dinara nwayọ n'azụ ya, dị ka a ga-asị na ọ na-ehi ụra, jiri aka ya kpee ekpere. N'ịghọta Uche anwụọla, ọ na-apụ apụ n'ebe ahụ, na-akpọ maka nkwado ndabere.
Nke ahụ abụghị, Otú ọ dị, ihe ngosi kachasị awụ akpata oyi n'ahụ nke ihe omume ahụ. Ka Wayne gwụchara ihe omume nke Nọvemba 7 maka nkwụnye ego ahụ, a gwara ya na e nweela ohi na Oklahoma, nke mepụtara otu mpempe akwụkwọ-ha bụ nke Julie. Julie ọ ka dị ndụ?! Ma ọ bụ na ọ nwere ihe na-eme ihe adịghị mma?
Ya mere. Ọtụtụ. Mme mbụme. Agba nke abụọ Ezigbo onye isi premieres ozugbo ihe omume otu, sochiri nke atọ na Jenụwarị 20 na 9 pm na HBO.
Njikọ: Oge 'Riverdale' Oge 3 Ga-abụ Nchikota nke 'Ezi Onye Nchọpụta' & Dungeons & Dragons
Akwụkwọ kacha mma na-atọ ụtọ oge niile
mfe snoo na-eme n'ụlọ
ọgwụgwọ India maka dandruff
ihe nkiri dabere na akụkọ ịhụnanya
uru nke itinye mmanụ a honeyụ na egbugbere ọnụ